KEYDMEDIA - First Modern Somali News & Video Website - Warar - Tarsan oo ugu baaqay ganacsatada in ay maalgashadaan wadanka
Tarsan oo ugu baaqay ganacsatada in ay maalgashadaan wadanka
Muqdisho (KON) Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho aya ugu baaqay ganacsatada Soomaliyeed in ay kordhiyaan maalgashiga ay ku sameynayaan dalkooda.
Maxamuud Axmed Nuur Tarsan Gudoomiyaha gobalka ayaa sheegay in loo baahanyahay isku filnaansho, haatana lagu gaari karo in wadanka lagu sameeyo maalgashi.
Hadalkaan ayaa gudoomiyaha wuxuu ka sheegay xili uu xariga uu ka jarayay hotel cusub oo laga furay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Shibis kaasi oo ay furteen ganacsato Soomaaliyeed.
Sidoo kale Tarsan ayaa soo hadalqaaday sida loogu baahanyahay in ganacsatada Soomaaliyeed ay uga qeybqaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalkeena, isagoo intaa ku daray in dowladdu ay dhiirigelineyso in ganacsatadu ay maalgashi ku sameeyaan dalkooda.
Hadalka ka soo yeeray gudoomiyaha gobalka Banaadir ayaa wuxuu ku soo adayaa xili isbadal wayn haatan laga dareemayo Muqdisho, oo haatan u muuqata in ay gaarayo nabad iyo horumar.